हराएको मोबाइलमा भेटियो बाँदरको सेल्फी - नागरिक रैबार
एजेन्सी । बाँदर मान्छेको पुर्खा हो भन्ने त सुनिएकै हो । बाँदरका धेरै आनीबानीहरु मान्छेसँग मिल्छन् भन्ने वन्यजन्तुविदहरुको भनाइ छ । बाँदरले पनि मान्छेकै जस्तो हर्कत गर्दछ भन्ने तथ्यलाई हालै एउटा बाँदरले मलेसियामा पुष्टि गरेको छ ।
मलेसियामा एकजना व्यक्तिले आफ्नो हराएर फेला परेको मोबाइलमा बाँदरको सेल्फी तथा भिडियो रहेको दाबी ग्रेका छन् । २० वर्षका ज्याक्रिड्स रोडजीका अनुसार रातमा सुतेको समयमा उनको स्मार्टफोन हराएको थियो ।
सुतेकै ठाउँबाट मोबाइल कसरी हरायो ? भन्ने उनलाई पनि अचम्म लागेको थियो र त्यो एउटा चमत्कार नै भएको ठानिरहेका थिए । उनको मोबाइल हराएकै दिन उनका बुवाले घरको बाहिर एउटा बाँदर बसेको देखेका थिए । जसका कारण बाँदरले नै मोबाइल चोरी गरेको हुनसक्ने आशंका रोडजीका परिवारले गरे ।
हराएको मोबाइल खोज्न भन्दै रोडजी र उनका परिवारका सदस्यहरु एकाबिहानै जंगलतर्फ लागे । जंगलमा उनीहरुले हराएको मोबाइलको नम्बरमा फोन डायल गरिरहे । त्यही बीचमा एउटा रुखको मुनि दलदलमा फोनको घण्टी बजेको आवाज सुनियो । त्यहाँ केहीबेर खोजविन गरेपनि हराएको उक्त मोबाइल फेला पर्यो ।
उनले बाँदरले खिचेका ती तस्वीरहरुको एक भिडियो बनाएर ट्वीटरमा अपलोड गरे । जसमा बाँदरका विभिन्न खाले तस्वीरहरु तथा सेल्फी समेत देख्न सकिन्छ । उनले ट्वीटरमा अपलोड गरेको भिडियो झण्डै ३ लाखले हेरिसकेका छन् भने ६ हजारले रिट्वीट गरेका छन् ।
नेपालमै यस्तो परम्परा : ‘जहाँ विवाहपछि सबै दाजुभाईसँग पालैपालो सम्भोग गर्नुपर्छ’
डोल्पा । माथिल्लो डोल्पाका केही गाउँपालिकामा बहुपति र पाण्डु प्रथा अझै चल्दैछ । तिब्बती संस्कार प्रचलनमा रहेका क्षेत्रमा त्यस्ता पुराना प्रथा हट्न सकेको छैन । डोल्पोबुद्ध, शे–फोक्सुण्डो र छार्काताङसोङ गाउँपालिकाका केही परिवारमा अझै बहुपति प्रथामा छन् । जेठो दाजुले विवाह गरी भित्र्याएकी दुलहीलाई सबै भाइले श्रीमति मान्ने चलन नै बहुपति प्रथा हो । खाद्यान्न उत्पादन कम […]
काठमाडौं । कामका लागि विभिन्न ठाउँमा गएका मजदुरहरु कोरोना भाइरसका कारण धमाधम गाउँघर फर्किँदैछन् । तर भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण टाढा टाढाबाट फर्किएका मानिसहरुलाई क्वारेन्टाइनमा बसालेर मात्रै गाउँघरमा छिराउने गरिएको छ । क्वारेन्टाइनको बसाइ पूरा गरेर घर फर्किने मजदुरहरुका लागि सरकारले कस्तो उपहार देला ? भारतको बिहारमा चाहिँ १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेका प्रवासी मजदुरहरुको हातमा […]
एजेन्सी-इण्डोनेसियामा बिहे गर्नका लागि अब ३ महिनाको तालिम पास गर्नुपर्ने नियम सुरु हुँदैछ । मिडिया रिपोर्ट अनुसार इण्डोनेसिया सरकारले सन् २०२० देखि प्री-वेडिङ कोर्स अर्थात् विवाहपूर्व पाठ्यक्रम निःशुल्क रुपमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । इण्डोनेसियाको मानव विकास तथा संस्कृति मन्त्रालय, धार्मिक मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा यो पाठ्यक्रम तयार पारेका हुन् । […]
अत्याधिक जाड रक्सी खाने बानिले मानिस पूर्णतया रक्सिको अधिनमा हुन्छ । अत्याधिक मदिराको आदतलाई तत्काल छोड्दा पनि मानिसमा त्यसको प्रभाव लामो समय रहन्छ। रक्सीले बिचार, निन्द्रा , भावाना सामाजिक ब्यवहार , यौन सबैमा असर पर्छ । मदिराको प्रयोगले मदिरा सेवन गर्ने व्यक्तिलाई मात्र होइ उसको परिवार, उ बसेको समाजलाई पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा असर […]
फेसबुकमा कति आयो लाइक भन्ने अब थाहा नहुने !
फेसबुकले लाइकको संख्या लुकाउने तयारी गरेको दाबी गरिएका समाचारहरु बाहिरिएका छन् । विश्वको सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता रहेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले युवाहरुमा सामाजिक सञ्जालको चर्चाले मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या ल्याउन सक्ने भन्दै यस्तो तयारी गरेको हुनसक्ने अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । फेसबुकले लाइक लुकाउनका लागि कोडिङ गरिरहेको एक जना इन्जिनियरले पत्ता लगाएको बीबीसीले जनाएको छ । विज्ञापन […]